Somaliland oo Ruqsadii kala noqotay Labo Telefishin
HARGAYSA, Somaliland- Xukuumadda Somaliland gaar ahaan wasaaradda Warfaafinta ayaa shaacisay inay Ruqsadii kala noqdeen Labo Telefishin.
Wasaaradda Warfaafinta Somaliland, ayaa sheegtay in SBS TV iyo SOMNEWS TV laga mamnuucay inay ka howlgalaan deegaanada ay maamusho.
Waxaa lagu eedeeyay labada TV inay baahiyaan barnaamijyo iyo warbixino guubaabo ah islamarkaana kicinaya dadweynaha kuwaasoo ay ku tilmaamay kuwo Qabiilaysan.
Tallaabada lagu xiray labada Telefishin ayaa timid xilli maamulka Hargaysa uu muddooyinkii dambe lagu eedaynayay inuu caburinayo shacabka ku dhaqan gobolka Sool, kuwaasoo aad uga soo horjeestay qorshaha ay ku joogaan deegaano kamid ah gobolkaas.
Hoos ka Akhriso War-ka lagu xayiray Warbaahintaas oo lagu daabacay Warbaahinta Somaliland gaarka u leedahay ee SOLNA.
Waxa caddaan ah in labada telefishan ee kala ah SBS TV & SOMNEWS TV ay ku kaceen falal olole siyaasadeed iyo dagaal borobagaande cad oo ay ku hayaan qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.
Tusaale cad waxa u ah falalkaas siyaasadeed iyo kicintaas muuqaallada iyo heesaha joogtada ah ee guubaabada ah ee loogu hanjabayo Somaliland, isla markaasi loogu samaynayo borobagaandhe taageero ah Puntland..
Hogaamiyaha maamlka gooni isu taaga ah ayaa waxa uu shacabka Hargeysa la oogay Salaada Ciidul Fidriga.
Ganacsatada Somaliland ee ku sugan Garowe oo u jawaabay Faysal [Daawo]
Puntland 12.06.2018. 05:29